TAT waxay soo bandhigtay "Booqashada Thailand Sannadka 2022" Cusub ee WTM 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » TAT waxay soo bandhigtay "Booqashada Thailand Sannadka 2022" Cusub ee WTM 2021
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Siripakorn Cheawsamoot, Gudoomiye Ku Xigeenka TAT ee Isgaadhsiinta Suuqgeynta
Hay'adda Dalxiiska ee Thailand (TAT) ayaa maanta soo bandhigtay ololaha suuqgeynta cusub ee "Booqo Thailand Sannadka 2022" wufuudda ka qaybgalaysa Shirka Jaraa'id ee dib u furaya Thailand ee Suuqa Socdaalka Adduunka (WTM) 2021 ee London, UK.
Xaaladda COVID-19 adduunku way soo raynaysaa, xawliga dalxiiskuna mar kale ayuu soo noqonayaa.
Thailand waxay u aragtaa fursadan inay hore ugu sii wado qorshaha dib u furista safarka karantiil la'aanta ee socotada si buuxda u talaalan.
TAT waxay siinaysaa dalxiisayaasha "Cutubyo Cusub oo Cajiib ah" si ay uga helaan Thailand iyadoo Boqortooyada ay dib u furayso xuduudaheeda, karantiil bilaash ah, socotada caalamiga ah laga bilaabo Noofambar 1, 2021.
Ololahan waxa ka hadlay Mr. Siripakorn Cheawsamot, oo ah guddoomiye ku xigeenka TAT ee dhinaca isgaadhsiinta suuq-geynta, oo isagu marti-geliyay xafladda. "sida cutub cusub oo Thailand ah kaas oo dadka socotada ah ee dunidu ay la kulmi karaan" Cutubyo Cusub oo Cajiib ah" oo ku yaal meesha weligeed caanka ah."
Mr. Siripakorn ayaa yidhi, Hadda oo xaaladda COVID-19 adduunka oo dhan ay ka soo raynayso, iyo dardargelinta dalxiisku mar kale soo laabanayso, Thailand waxay arkaysaa fursad ay hore ugu riixdo dib u furitaanka qorshaha safarka karantiil la'aanta si buuxda loo tallaalo socotada. Ma jirto waqti ka wanaagsan oo lagu soo bandhigo alaabada iyo adeegyada dalxiiska ee cusub, iyo sidoo kale in dib loo cusboonaysiiyo meelaha la jecel yahay ee Thailand iftiin cusub.
Cutubka 1, ama cutubka koowaad, wuxuu arki doonaa TAT oo iftiimin doonta alaabada iyo adeegyada dalxiiska ee kicin doona shanta dareeme ee socotada, sida, cunnada Thai ee macaan iyo muuqaalka dabiiciga ah ee quruxda badan ee laga heli karo boqortooyada oo dhan.
Cutubka 2, cinwaankiisu yahay Kan aad Jeceshahay, TAT waxay diiradda saari doontaa qaybo gaar ah sida qoysaska, lammaanaha, iyo saaxiibada waxayna ku martiqaadi doontaa inay abuuraan xasuus cajiib ah gudaha Thailand. Bangkok, Phuket, iyo Chiang Mai gaar ahaan waxaa loo dallacsiin doonaa meelaha caanka ah ee loo aado aroosyada iyo kuwa bisha malabka ah, oo leh xeebahooda quruxda badan, meelaha buuraleyda ah, iyo rafcaanka magaalada.
Cutubka 3aad, Dhulka aan Daryeeleyno, wuxuu iftiimin doonaa sida fursadda dabiiciga ah ee dib loogu soo nooleynayo xaaladda COVID-19 ay u kordhisay wacyiga dalxiiska ee socotada adduunka iyo sida hab-dhaqankoodu u saameeyay deegaanka. Soo ifbaxa qaybaha safarka sida dalxiiska Wilderness (Escapers) iyo Cult-Vacation (Miyir) waxay sidoo kale muujin doontaa in dabeecadda socotada ay u beddeshay in ay waqti badan ku qaataan dabeecadda iyo in ay sii kordheyso dareenka saameynta ay ku leeyihiin kheyraadka dabiiciga ah.
Intaa waxaa dheer, qaybaha kale ee lagu muujinayo waxaa ka mid ah gastronomy, caafimaadka iyo fayoobaanta, iyo sidoo kale "shaqo," taas oo noqotay isbeddel sii kordhaya marka imaatinka masiibada COVID-19 ay u oggolaan doonto dadka inay meel fog ka shaqeeyaan oo ay ku raaxaystaan ​​fasax.
Si kor loogu qaado dalxiiska mas'uulka ah iyo waara ee Thailand, TAT waxay qaadatay BCG
(Bio-Circular-cagaaran dhaqaalaha) qaab lagu dhiso xoogga dalka ee kala duwanaanshaha noole iyo hodantinimada dhaqanka iyo in la mideeyo technology kor loogu qaado qiimaha wax soo saarka si loo gaaro koritaanka waarta. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in dakhliga loo qaybiyo bulshooyinka maxalliga ah iyo xallinta awoodda xad-dhaafka ah iyo arrimaha deegaanka ee sii xumaanaya ee laga helo meelaha waaweyn.
Mr. Siripakorn waxa kale oo uu siiyey shirka jaraa’id ee WTM 2021 warbixin ku saabsan qorshaha dib u furista meelaha kala duwan ee Thailand.
Laga bilaabo maanta (Noofambar 1), dib u furista Thailand waxay gashay wajigii koowaad waxayna soo dhawaynaysaa booqdayaasha si buuxda u tallaalay UK iyo 62 dal/territories kale oo leh shuruud "Test & Go". Dadka safarka ah ee qaybtan hoos yimaada waa laga dhaafayaa karantiil. Liiskan wadamada/dhulyada la ansixiyay waa la balaadhin doonaa hadhow si loo daboolo aduunka oo dhan laga bilaabo Janaayo 1, 2022.
Sidoo kale, laga bilaabo maanta, ilaa Noofambar 30, 17-ka loogu yeero "Boostada Bacaadka Buluugga ah" ee Thailand ayaa dib loo furayaa. Kuwaasi waa - Bangkok, Krabi, Phuket, Chon Buri (Banglamung, Pattaya, Si Racha, Ko Si Chang, iyo Sattahip - Na Jomtien iyo Bang Sarey), Chiang Mai (Mueang, Doi Tao, Mae Rim, iyo Mae Taeng), Trat (Ko Chang), Buri Ram (Mueang), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin iyo Nong Kae), Phang-Nga, Phetchaburi (Cha-Am), Ranong (Ko Phayam), Rayong (Ko Samet), Loei (Chiang Khan), Samut Prakan (Garoonka Diyaaradaha ee Suvarnabhumi), Sawirka Thani (Ko Samui, Ko Pha-ngan, iyo Ko Tao), Nong Khai (Mueang, Sangkhom, Si Chiang Mai, iyo Tha Bo), iyo Udon Thani (Mueang, Ban Dung, Kumphawapi, Na Yung, Nong Han, iyo Prachaksinlapakhom). Soo-booqdayaasha si buuxda u talaalan ee ka taga meelaha aan ka tirsanayn 63-da waddan/dhul-goboleedyadu waxay soo geli karaan Thailand oo hoos yimaada meelaha ay u socdaalayaan ee Aagga Sanduuqa Baluuga ah. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dib u furista Thailand, fadlan booqo halkan.
Dhanka kale, si loo fududeeyo booqashada Thailand, nidaamka cusub ee "Thailand Pass" waxaa soo saaray Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Wakaaladda Horumarinta Dijital ah ee Dawladda (DGA), illaa maanta (Noofambar 1) waa laga heli karaa halkan. Nidaamkan ku salaysan mareegaha ayaa u oggolaanaya dadka safarka ah ee Thai iyo ajnabiga ah in ay soo gudbiyaan macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo dukumentiyada ka hor inta aysan dhoofin si habaysan.
Suuqyada UK iyo Yurub, Mr. Siripakorn wuxuu sheegay in imaatinka ay ku laabanayaan Thailand si ay ugu qancaan. "Diyaarad badan ayaa bixiya duulimaadyo toos ah oo awood badan leh oo taga Thailand. Intaa waxaa dheer, THAI Airways International waxay dib u bilaabaysaa 38 waddo oo Thailand ah, oo ay ku jiraan 7 waddo oo u dhexeeya Thailand iyo magaalooyinka Yurub si ay u taageeraan barnaamijka Sandbox Sanduuqa ee Phuket iyo 10 khadadka u dhexeeya Bangkok iyo magaalooyinka Yurub."
Laga soo bilaabo Boqortooyada Midowday, waxaa jira ku dhawaad ​​​​150,000 kursi usbuuciiba ilaa Thailand oo ay ku jiraan 7 duulimaad maalinle ah oo leh Emirates, Etihad, Qatar iyo Thai Airways. TUI waxay dib u bilaabi doontaa duullimaadyadii kirada ahaa ee Thailand laga bilaabo Disembar 15 iyo BA iyo EVA Air waxay dib u bilaabayaan adeeggooda laga bilaabo Janaayo 2022.
TAT UK waxay sii wadaa inay soo bandhigto ganacsigooda iibka iyo qorshayaasha suuqgeynta oo ay weheliso PR & istaraatijiyad isgaarsiineed si kor loogu qaado Tijaabada & Tag karantiil dib u furitaan bilaash ah laga bilaabo Noofambar 1 iyo sidoo kale Booqo Sannadka Thailand. "Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno wakiilada safarka ee safarada familka ah iyo warbaahinta iyo saameeyayaasha si ay mar kale u sahamiyaan waddankeena - ugu dambeyntii waxaan mar kale ka dhigi karnaa riyooyinka safarka mid dhab ah." Ayuu hadalkiisa ku soo xidhay Mr. Siripakorn.